Duraka Kura दुराका कुरा: बिदा हलो क्रान्ति–नायक !
यी सबै खालका टीका–टिप्पणीको प्रत्युत्तरमा हलोक्रान्तिका नायकहरूले एकै स्वरमा बयान दिए– अन्न उब्जाउने जस्तो पवित्र कामको प्रयोजनका लागि हलो जोत्नुमा कुनै पाप छैन ।
हलो क्रान्तिको यो झिल्काबाट देशका अन्य भागमा पनि क्रान्तिको मसाल सल्किन थाले । अरू जिल्लाका ब्राह्मणहरूले पनि धमाधम हलो जोत्न थाले । यसबाट हलो क्रान्तिलाई समर्थन मिल्यो ।
हलो क्रान्तिसँगै उहाँले राणा शासनको तल्लो निकायका तालुकदार (जिम्मावाल एवं मुखिया) कहाँ कर बुझाउन जाँदा घ्यू, दही लैजानु पर्ने र उनीहरूको खेतबारीमा निःशुल्क काम गर्नु पर्ने सामन्ती परिपाटीको खुलेर विरोध गर्नुभयो । उहाँले ठाउँ ठाउँमा भाषण गरेर यस दिशामा नागरिकलाई सजग तुल्याउनुभयो ।
विसं २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि खुला राजनीतिक परिवेश खडा भयो । देशका नागरिक आफ्ना उन्नतिका लागि स्वाभाविक रूपमा जुर्मुराउन थाले । यही मेहरोमा श्रीकान्त अधिकारीको अगुवाइमा विसं २००८ सालमा दुराडाँडा क्षेत्रमा १२ वटा प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरेर चेतनाको दियो बाल्ने काम भयो । यसैगरी विसं २००९ सालमा सर्वोदय विद्यालय स्थापना भयो । विद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा श्रीकान्त अधिकारी र उहाँका सहकर्मीहरूले धेरै दुःखकष्ट ब्यहोर्नु परेको थियो । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अभियान चलाउँदा ‘हाम्रा छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएपछि गाइवस्तु कसले हेरिदिन्छन्’ भनेर प्रश्न गर्ने अभिभावकको उहाँहरूले सामना गर्नुपर्यो । भौतिक पूर्वाधार र स्रोत–साधनको चर्को अभाव अर्को चुनौती थियो । उहाँहरूले खेप्नु भएका दुःखकष्टको बेलिविस्तार लगाउँदा एउटा ग्रन्थ नै तयार हुन्छ । तत्कालीन शिक्षासेवीले भोग्नुपरेका दुःखकष्ट र सङ्घर्षपूर्ण क्षणहरूको वृत्तान्त ‘अन्नपूर्ण काख’ नामक पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ ।
देशको सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलनलाई मुख्य कर्म बनाएर अगाडि बढ्दा श्रीकान्त अधिकारीलाई राजनीतिक र सामाजिकरूपमा स्थापित गरायो । उहाँको सकारात्मक छवि विकास हुँदैगयो । उहाँ वि.सं २०१५ सालको संसदीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै लमजुङ जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभयो ।
यहाँको सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्व चम्किंदै गइरहेको बेला विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरु भयो । विसं २०२१ सालमा उहाँ पञ्चायतमा सामेल हुनुभयो । पञ्चायती व्यवस्थाले चारैतिरबाट नाकाबन्दी गरेपछि बाध्य भएर पञ्चायतमा प्रवेश गरेको स्पष्टीकरण अनौपचारिक कुराकानीमा दिनुहुन्थ्यो । देशको राजनीतिक व्यवस्थासँग पौँठेजोरी खेलेर समाज सुधारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएकाले वाध्य भएर आफू पञ्चायती व्यवस्थामा सामेल भएको तर्क उहाँको थियो । उहाँको स्पष्टीकरण र तर्कसित पार्टी कार्यकर्ता सहमत भएनन् । यसबाट उहाँको राजनीतिक–जीवन (करियर) मा ठूलो धक्का लाग्यो । पञ्चायतमा सामेल भएपछि उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस–वृत्तमा आलोचितमात्र हुनुभएन, पार्टीको लक्ष्मणरेखाबाट आजीवन बाहिरिनुभयो । उहाँको राजनीतिक जीवनमा यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो ।
उहाँको राजनीतिक ‘बर्को–फेराइ’ ले समाजसेवाप्रतिको उहाँको लगावमा भने कुनै कमी आएन । उहाँ समाजको वृहत्तर हितका लागि डटेरै अघि बढ्नुभयो । विशेषगरी शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार विकासमा अभियन्ताकै रूपमा अघि बढिरहनु भयो ।
उहाँ बेँसीका मलिला फाँटहरूमा बस्ती बसाइनु हुन्न, त्यस्ता फाँटमा खेतीपाती गरिनुपर्छ र उब्जनीका हिसाबले कमसल मानिएका डाँडाहरूमा बस्ती बसाइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । लमजुङको सदरमुकाम कुन्छाबाट बेँसीशहर सार्दा पनि उहाँले असहमति जनाउनुभएको थियो । खेतीपातीका लागि उब्जाउ भूमि मानिने बेँसीशहरलाई जिल्ला सदरमुकाम बनाएर ‘क्रन्क्रिट–जङ्गल’ उभ्याइनुहुँदैन भन्ने उहाँको मान्यता थियो । उहाँले यसको बिकल्प पनि दिनुभएको थियो । बेँसीशहरभन्दा दक्षिणतिर रहेको शीतलस्वाँरा नजिकको डाँडामा सदरमुकाम सार्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो । त्यसबेला उहाँको बोली बिकेन तर पनि बोल्न छाड्नुभएन । उहाँ पछिसम्म पनि भनिरहनुहुन्थ्यो– मलिलो फाँट मासेर बेँसीशहरमा सदरमुकाम सार्ने निर्णय गलत थियो ।
विसं २०२१ सालमा उहाँको नेतृत्वमा जनश्रम परिचालन गरी शीतलस्वाँरामा हवाइ मैदान बनाउने काम गरिएको थियो । राजनीतिक कोपको शिकार भएर हो वा उत्तराधिकारी पुस्तामा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भएर हो ? शीतलस्वाँराको हवाइ मैदान अहिलेसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।
पहिचान र अत्मसम्मानका लागि छट्पटाइरहेका अल्पसङ्ख्यक दुरा समुदायका लागि उहाँ अवतारकै रूपमा प्रकट हुनुभयो । विदेशी सेनामा भर्ती हुन पनि जात लुकाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका एवं सामाजिक र आर्थिकरूपमा पछाडि पारिएका दुरा समुदायलाई अत्मसम्मानसहित चिनाउने दिशामा उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका वन्दनीय छ ।
खरबारीभित्र हराएको सिंदुरे ढुङ्गा तथा विस्मृतिको गर्भभित्रै हराउनअलागेका खजे दुराको ऐतिहासिकता खोजखनिज गरेर दुरा समुदायको परिचयको दायरा फराकिलो पार्ने दिशामा उहाँले विशिष्ट योगदान दिनुभयो । विसं २०३३ मा दुराडाँडाको च्यानपाटामा खजे दुराको शालिक उभ्याउने र प्रसिद्ध लोकगायक देउबहादुर दुराको नाममा ‘देउबहादुर कला केन्द्र’ को शिलान्यास गर्ने काम श्रीकान्त अधिकारीकै नेतृत्वमा भएको थियो ।
यसबाट दुरा समुदायको पहिचान र आत्मसम्मानको ‘ग्राफ’ उकालोमात्र लागेन, नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय जनसमक्ष उजागर भयो । यस हिसाबले उहाँको भूमिका दुरा समुदायका लागि निष्पट अँधरोमा अल्मलिएका यात्रीलाई सिठा बालेर बाटो देखाउने अगुवाको जस्तो रह्यो ।
विसं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चर्कोरूपमा देखापरेको गुट–उपगुट र घात–प्रतिघातबाट श्रीकान्त अधिकारी निकै दुःखी पाइनुहुन्थ्यो । राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्ग दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएको टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो । राजनीतिको मूलभूत लक्ष्य समाजसेवा नै भए पनि यसलाई व्यवसाय ठान्ने प्रवृत्ति बढेकाले देशले दुर्गति भोग्नुपरेको उहाँको ठहर थियो ।
उहाँ राजनीतिक नेतृत्वमा चारित्रिक एवं आत्मिक शुद्धीकरणमा जोड दिनुहुन्थ्यो । राजनीति सबै नीतिहरूको माउ–नीति भएकाले राजनीति ध्वस्त भएमा बाँकी सबै नीति बिग्रन्छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँ राजनीति गर्नेहरू समाजको वृहत्तर हितको उच्चतम आदर्शलाई आत्मसात गरेर स्वार्थरहित ढङ्गमा जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।
समाजको वृहत्तर हितका लागि युवा–पुस्तालाई झक्झक्याउन, उत्प्रेरित गर्नबाट कहिल्यै नथाक्ने श्रीकान्त अधिकारी साँचो अर्थमा सामाजिक योद्धा हुनुहुन्थ्यो । भौतिक चोला त्याग्नुभन्दा एक हप्ता अघिमात्र सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सव र ३७ औँ खजे दुरा स्मृति दिवसमा सहभागी भएर काठमाडौँ फर्कनुभएको थियो । समाजको वृहत्तर हितका लागि आफूलाई समर्पित गर्न चाहनेहरूका लागि उहाँ आफैमा एउटा पाठ हुनुहुन्थ्यो । त्यस्ता लोकहितैषी प्रेरणादायी पात्रलाई सलाम !
[साभार : नागरिक (मंसिर ९, २०६९) । सामान्य परिमार्जनसहित]
[अद्यावधिक : २०६९।०८।१०, २०६९।०८।२९, २०६९।०९।११, २०६९।०९।१७, २०६९।०९।२२, २०६९।०९।२९, २०७०।०५।०३]
Posted by दुराका कुरा at 8:23 AM